Xildhibaan Cumar Waaberi oo Puntland ku dhaliilay iney mas'uul ka tahay Doonida ku caariday Boosaaso | SAHAN ONLINE
Xildhibaan Cumar Waaberi oo Puntland ku dhaliilay iney mas’uul ka tahay Doonida ku caariday Boosaaso
Xildhibaan Cumar Ismaaciil Waaberi
MUQDISHO – Xildhibaan Cumar Ismaaciil Waaberi oo ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya ayaa Puntland ku eedeeyay iney qaadayso mas’uuliyadda dooni laba maalin ka hor kusoo caarisay xeebta Boosaaso.
Xildhibaan Cumar Ismaaciil Waaberi oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in wax laga xumaado ay tahay qaabkii ay Puntland uga jawaabtay shilkaas,wuxuuna sheegay in hantida dadweynaha ay mas’uul ka tahay Xukuumadda Puntland.
Hantida doonta saaran waa mid aad u badan, waxay ahayd in doonida la dhageysto maadaama dhib uu haystay, mas’uuliyaddeeda waxaa qaadaya cid walbo oo shaqo ku leh arrimahan oo ay ugu horreyso wasaaradda dekadaha, waxay ahayd in si degdeg ah dekadda loo soo geliyo oo la badbaadiyo hantida doonida saaran”ayuu yiri Xildhibaan.
Xildhibaanka oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in beddelkii ay Wasaaradda Dekedaha is difaaci lahayd ay xilka baneeyaan Madaxda Wasaaradda maadaama ay muuqato diyac si mas’uuliyadooda ah waa sida uu hadalka u dhigaye.
Ugu dambeyn ,Xildhibaan Cumar Ismaaciil Waaberi ayaa codsaday in gacan laga geysto sidii gurmad loogu sameyn lahaa badbaada hantida saaran doonidan soo caarisay.